किन देखिन्छ डर लाग्दो सपना ? यस्तो छ अध्ययनको निस्कर्ष – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ आश्विन ४, शनिबार १३:३८
के तपाईँ राती डरलाग्दो सपना देखेर तर्सिनु हुन्छ ? अनि ब्युझिँदा शरीर पसिना पसिना पनि हुन्छ ? अब न आत्तिनुहोस् । यसको ठूलो कारण छैन् सहज रुपमै यस्तो समस्या दुर गर्न सकिन्छ ।
किनभने बैज्ञानिकहरुले यहि विषयमा गहिरो अध्ययन गरी डर लाग्दो सपना देखिनुको कारण पत्ता लगाएका छन् । उनीहरुले त्यसको समाधान कसरी गर्ने समेत उपाय थाह पाएका छन् ।
हंङकङको सूयान विश्वविद्यालका अनुसन्धानकर्ता क्यालभिन काई चिङको नेतृत्वमा एक अनुसन्धान टोलीले सपनामा देखिने दृश्य र सुताई अवस्थाको सम्वन्धबारे गहिरो अध्ययन गरेको थियो ।
सो क्रममा टोलीले मानिसले देख्ने सपना सुताईको अवस्थामा भर पर्ने निस्कर्ष निकालेको थियो । उनीहरुको अध्ययनले सपनामा आउने दृश्य सुताईको अवस्थाले निर्देशित हुने देखाएको छ ।
अध्ययनमा भनिएको छ जो व्यक्तिहरु आफ्नो शरीरको बाँया तिर कोल्टो परेर सुत्छन तिनीहरुलाई डरलाग्दो सपनाले सताउने गर्छ । तर दाँया तिर कोल्टेर परेर सुत्ने व्यक्तिहरुको सपना सुखद र आनन्ददायी हुन्छ ।
अध्यय्न अनुसार बाँया फर्केर सुत्ने मध्ये ४० प्रतिशत मानिसहरुमा राती डरलाग्दो सपना आउने र निद्रा खलबलिने गरेको पाइयो । जबकी दायाँ फर्केर सुत्नेहरुमा यस्तो सपना १४.६ प्रतिशतमा मात्रै पाइयो । सोही प्रतिवेदन अनुसार दायाँ फर्केर सुत्ने र मानिसहरुमा भने सुखद र सुरक्षित सपना आउनुको साथै निद्रा आनन्दित भएको पाइयो ।
प्रतिवेदनले यो पनि भनेको छ कि जो व्यक्ति घोप्टो परेर सुत्छन तिनीहरुको सपना यौनसंग सम्वन्धीत हुने गर्दछ । त्यस्तै उत्तानो परेर सुत्ने व्यक्तिमा हात बाधिएको, कोठामा थुनिएको तथा चल्नै नमिल्ने गरेको सपना (जसलाई हामी ऐठन गरेको समेत भन्छौँ) देख्ने गरेको पाइयो ।
मुख्य अनुसन्धानकर्ता क्यालभिन काई चिङ भन्छन्, यो अध्ययनले सपनालाई सुत्ने पोजिसनले प्रभाव पार्छ भन्ने देखाएको छ । उनका अनुसार निद्रामा पनि मानिसका मस्तिस्क बाहिरी बाताबरणसंग सम्वन्ध राखिराख्ने भएकोले बाहिरी अवस्थाले सपनालाई प्रभाव पार्छ । एजेन्सी
यसकारण हुन्छन् मान्छे बायाँहाते : बैज्ञानिक तथ्य
२०७६ आश्विन ९, बिहीबार ०६:०२
केराको बोक्रा नफाल्नुहोस्, चमत्कारिक फाइदा लिन सकिन्छ
२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार ०८:४१
प्रेम र ‘भ्यालेन्टाइन डे’ : प्रेमलाई सफल बनाउने शुत्र
२०७६ फाल्गुन २, शुक्रबार २०:४४
विवाहपछि युवतीहरु मोटाउनुको यस्तो छ कारण
२०७६ आश्विन ११, शनिबार ०६:२५
स्कुस एक फाइदा अनेक
२०७८ जेष्ठ ६, बिहीबार ०४:४३